Shiinaha DCME warshad dhan-in-hal Gateway iyo alaab-qeybiyeyaal. Yunke
DCME waa jiil cusub oo marin waxqabad sare leh adoo adeegsanaya processor-wax-qabad badan oo heer sare ah, oo ay weheliso Chipset ASIC ah. Iyada oo leh waxqabad sare iyo awoodo awood u leh soosaarida xogta, DCME waxay ku shaqeysaa xawaaraha silig-xawaaraha iyo tirada hogaaminta warshadaha ee isku xirnaanta cusub marka la barbardhigo firewall-ka dhaqameed iyo routerka dhaqameed. DCME waxay iskuxidhaa routerka ballaadhan, dab-damiska, shidma, VPN, maaraynta taraafikada iyo xakamaynta, amniga shabakadda, xakamaynta wireless iyo fudud ...
DCME waa jiil cusub oo marin waxqabad sare leh adoo adeegsanaya processor-wax-qabad badan oo heer sare ah, oo ay weheliso Chipset ASIC ah. Iyada oo leh waxqabad sare iyo awoodo awood u leh soosaarida xogta, DCME waxay ku shaqeysaa xawaaraha silig-xawaaraha iyo tirada hogaaminta warshadaha ee isku xirnaanta cusub marka la barbardhigo firewall-ka dhaqameed iyo routerka dhaqameed. DCME waxay iskuxidhaa routerka balaaran, firewall, biiro, VPN, maaraynta taraafikada iyo xakamaynta, amniga shabakada, xakamaynta wirelesska iyo qaabeynta qaab fudud. Waxay ku habboon tahay shirkadaha yaryar iyo kuwa dhexe, iskuulada, dowladda, dukaamada silsiladaha leh, kafateeriyada dhexdhexaadka ah ee Internetka, hawlwadeenada iyo shabakad kale oo isku dhafan.
Waxqabadka xoogan ee hoos yimaada dhismaha qalabka casriga ah
Albaabka amniga ee DCME wuxuu adeegsadaa processor-yo fara badan oo kaladuwan, ASIC oo heersare ah oo xawaare sare xawaare ku shaqeynaya kaasoo ka dhigaya dhammaan qalabka dhismaha inuu ku shaqeeyo qaab dhismeedka xawaaraha sare ee Ethernet. Naqshaddan waxqabadka sare waxay mashiinka ku dhashaa waxqabadka ka sarreeya waxayna bixisaa dammaanad qaadista xogta qoto dheer ee qaabeynta taraafikada iyo hawlgalka xasilloon ee amniga iyo difaaca, firewall / VPN, IPv6, iyo farsamooyinka lakabka sare ee hodanka ah.
Xakamaynta socodka saxda ah iyo maaraynta akhlaaqda
DCME waxay bixisaa siyaasadaha xakamaynta socodka saxda ah ee ku saleysan codsiyada, cinwaanada IP, macaamiisha, borotokollada, iwm, waxayna dejisaa ugu badnaan, ugu yaraan, ballaadhin ballaadhan oo kor loogu qaadayo kor iyo hoosba. In ka badan 200 borotokollada waxaa lagu aqoonsan karaa iyada oo loo marayo DCME si loo dejiyo dammaanad ballaadhin, xakamaynta xaddiga ku saleysan borotokoolka la cayimay. Iyada oo xaddidan kal-fadhiga NAT, khatarta tirooyinka kal-fadhiga sare ee ay sababaan qalab-kala-soo-degsiisyo badan iyo weerarro fayras.
Hawlaha firewall-ka hodanka ah
DCME waxay leedahay awood kahortaga weerarka. Iyadoo la adeegsanayo tirakoob faahfaahsan iyo falanqeyn sax ah oo ku saabsan xirmooyin kala duwan sida ARP, IP, ICMP, TCP, UDP, iyo noocyada kale ee baakadaha ah, weerarada waa la heli karaa waana la xannibi karaa oo ay ku jiraan SYN Flood, DDoS, Weerarada IP-ga ee kala-jajabinta, weerarada cinwaanka IP-ga, iwm Macluumaadka qeylodhaanta ayaa la bixin karaa si maamulka shabakadaada looga dhigo mid amni leh Iyadoo lagu saleynayo teknolojiyadda ogaanshaha heerka sare, DCME waxay bixisaa farsamooyin ka hortag ah oo loo yaqaan 'ARP ARP' oo ay ka mid yihiin IP + MAC ku xirxirashada, tikniyoolajiyadda iskaan-baarista ARP, barashada ARP ee lagu kalsoon yahay, shaandhaynta ARP. Isku xidhka IP / MAC iyo ka hortagga anti-ARP ee u dhexeeya macaamiisha iyo aaladaha si otomaatig ah ayaa loo samayn karaa.
Kontaroole marin-u-hel heer sare ah
Albaabka amniga ee DCME ayaa loo isticmaali karaa inuu ahaado xakamayn marin lagu rakibo shabakad wireless ah oo leh aaladaha DCN AP. Iyadoo lagu saleynayo tikniyoolajiyadda isku-dhafka maaraynta maareynta, DCME waxay la socon kartaa qiimaha RF ee meesha AP-kasta ku yaallo oo wuxuu hagaajin karaa awoodda calaamadaha iyo kanaalada AP kasta si otomaatig ah iyadoo loo eegayo lambarka isticmaalaha ama siyaasadda dheelitirka culeyska. Isla mar ahaantaana, waxay yareyn kartaa faragelinta calaamadaha wireless si loo ogaado dheelitirka culeyska iyo xasilloonida shabakadda bilaa-waayirka ah waxayna siisaa xalka ugu habboon shabakadaha dhexdhexaadka / yar-yar iyo laamaha shirkad weyn.
Maareyn hufan oo fudud iyo dayactir
Albaabka amniga ee DCME wuxuu qaataa bogga maareynta garaafka oo buuxa. Kaliya seddex tallaabo ayaa loo baahan yahay si loogu xiro DCME shabakadda oo leh saaxir qaabeynta.
Tallaabooyin kala duwan oo kormeer ah, oo ay ku jiraan kormeerka waxqabadka, feejignaanta fashilka, digniinta fayraska / weerarka, iwm, iyo tirakoobka iyo macluumaadka darajeynta ee ku saleysan ballaadhinta iyo fadhiga ayaa lagu taageeraa maamulka iyo dayactirka si fudud.
10/100 / 1000M Saldhig-T
1 RS-232 (RJ-45) konsol, 2 dekedda USB2.0
Awooda / nidaamka Run / port status
Ku shaqeynaya 0 ℃ -40 ℃
Kaydinta -20 ℃ -65 ℃
Ku shaqeynta 10% -85% Aan isku ururin
Kaydinta 5% -95% Aan isku ururin
Lagu taliyay adeegsadayaasha isku midka ah
Bandwidth Soo-jeedin La Soo Jeediyay
Wareejinta Labada Dhinac
Fadhi cusub ilbiriqsi kasta
Max kalfadhi isku mid ah
Max channel IPSec
Max isticmaalayaasha marin L2TP
Max SSL VPN isticmaalayaasha marin u helka
Max isticmaalayaasha xaqiijinta shabakadda
Maamulaha Helitaanka Wi-Fi
AP-yada la maamuli karo
APs ugu badnaan la maamuli karo
Wadada / NAT / Buundada
Shabakad Macaamiisha PPPoE, PPPoE chap / pap / midkastoo seddex hab xaqiijin ah, isku xirnaanshaha macmiilka PPPoE
DHCP Server, Macaamiil, gudbinta
Server DNS, wakiil
Joogitaanka joogtada ah, marinka joogtada ah ee leh mudnaanta, RIP
PBR (oo ku saleysan cinwaanka isha, dekedda isha, cinwaanka loo socdo, borotokoolka, iyo istiraatiijiyado kale), taageer IP-ga soo socda
Isku dheelitirka culeyska isku-dhafan ee isku-dhafan ee isku-dhafan, iyo xaddiga xaddiga dhejiska ayaa si otomaatig ah u hagaajinaya saamiga waddo kasta, si loo gaaro isu-dheellitirka culeyska ee ku saleysan khadka.
Shaqada gurmadka ee Multilink, jadwalka ogaanshaha xiriirka gobolka, iyo beddelka otomaatiga ah iyo dib udhaxeynta xiriiriyeyaasha
Xigasho NAT Static / Dynamic
1: 1 NAT1: N NATN: N NATIsku dheelitirka Xamuulka Adeegga
Borotokoollo badan NAT ALG
Kormeerka baakadka qoto dheer
Xakamaynta iyo xaddiga-xaddidan ee ku saabsan barnaamijka caanka ah ee P2P oo ay ku jiraan BT, eMule, eDonkey
Xakamaynta iyo xaddid-xaddiga codsiyada IM ee caanka ah oo ay ku jiraan Yahoo, GTalk, iwm.
Sifeynta URL, xisaabinta QQ
Xakamaynta xaddiga IP-ku-saleysan
Xakamaynta xayeysiiska ku saleysan codsiyada
Xakamaynta xawaaraha ku saleysan qulqulka
Dammaanad qaadka xadka, ballaadhinta baaxadda, qoondaynta xaddiga xawaaraha
2 heerarka xakamaynta xawaaraha (IP iyo xakamaynta xawaaraha xawaaraha, saldhig ku-saleysan)
Nidaamka difaaca ARP ee difaaca (arp learning, arp free, arp protection)
IP-MAC ku xiraya, buug gacmeed iyo otomaatig ah
Kahortaga weerarada ee DoS, DDoS
Kahortaga daadadka: daadadka ICMP, daadadka UDP, daadadka SYN
Su'aalaha DNS kahortagga daadadka: weydiimaha DNS & weydiinta soo noqnoqda ee weydiinta DNS ilaalinta daadka
Ogaanshaha anomaly IP, ogaanshaha anomaly TCP
Ka hortagga weerarka iskaanka cinwaanka IP-ga, ilaalinta skaanka dekedda
Diidmada Ilaalinta Adeegga: Ping of Death, Teardrop, IP split, IP options, Smurf or Fraggle, Land, ICMP pack big
iyada oo ku saleysan isdhexgalka, isha IP, halka loo socdo IP, iyo codsiyada (kalfadhiyo cusub ilbidhiqsi kasta iyo tirada kalfadhiyo isku mid ah)
Xakamaynta kalfadhiga waqtiga
Maareynta Wi-Fi, qaabeynta, kormeerka
Ku cusbooneysiinta qalabka qalabka iyada oo loo marayo WEB iyo TFTP
Dib u habeynta qaabeynta iyo soo celinta
Saaxir qaabeynta websaydhka
Maareynta walxaha oo ku saleysan cinwaanada IP, borotokollada, jadwalka, iyo isdhexgalka
Gal oo kormeer tirakoobka
Kormeerka iyo tirakoobka taraafikada iskuxirka
Kormeerka iyo tirakoobka taraafikada IP
Kormeerka iyo tirakoobka lambarka kulanka oo ku saleysan cinwaanka IP
Kormeerka iyo tirakoobka ku saabsan baaxadda iyo lambarka kulanka oo ku saleysan codsiyada
Kormeerka iyo tirakoobka tirada weerarada
Kormeerka iyo tirakoobka IP, dalab, iyo weerarada ku saleysan Amniga domain
Diiwaanka dhacdada / diiwaanka taraafikada / log logging / log alarm / log log
Kaydinta log USB
Isku halaynta sare Taageer isku dheelitirka xamuulka, isku xirka kaydinta
Farsamo isku xirnaan badan oo lagu ogaanayo
Codsiga caadiga 1: Dhoofinta Gateway, wuxuu isku daraa shaqooyinka routerka ballaadhan, dab-damiska, maaraynta taraafikada iyo xakamaynta, amniga shabakadda.
Codsiga caadiga ah 2: Dhis VPN Xiriirka u dhexeeya xarunta iyo laamaha
DCME-320-L DCME-320-L albaab isku dhafan, oo leh astaamaha routerka ballaadhan, dab-damiska, wareejinta, VPN, maaraynta taraafikada iyo xakamaynta, amniga shabakadda, xakamaynta wireless, oo leh dekedo 8 * 10/100 / 1000M Base-T, 1 * Console, 2 * USB2.0. ugu talagal 2 cutub AP liisanka ah, taageerida xakameynta max.32 APs, soo jeedi ugu badnaan 300 isticmaale.
DCME-320 (R2) DCME-320 (R2) marin isku dhafan, oo leh astaamaha routerka ballaadhan, dab-damiska, wareejinta, VPN, maaraynta taraafikada iyo xakamaynta, amniga shabakadda, xakamaynta wireless, oo leh dekedo 8 * 10/100 / 1000M Base-T, 2 * 1000M Combo , 1 * Konsol, 2 * USB2.0. ugu talagal 4 cutub AP liisanka ah, taageerida xakamaynta max.64 AP, soo jeedi ugu badnaan 500 isticmaale.
DCME-520 -L DCME-520-L waxay iskuxireysaa albaabka, oo leh astaamaha routerka ballaadhan, dab-damiska, wareejinta, VPN, maaraynta taraafikada iyo xakamaynta, amniga shabakadda, xakamaynta wireless, oo leh dekedo 6 * 10/100 / 1000M Base-T, 1 * Console, 2 * USB2.0. ugu talagal 6 cutub AP liisanka ah, taageerida xakamaynta ugu badan. 256 APs, soo jeedi ugu badnaan 1000-1200 isticmaale.
DCME-520 DCME-520 waxay iskuxidhaa albaabka, oo leh astaamaha routerka ballaadhan, dab-damiska, wareejinta, VPN, maaraynta taraafikada iyo xakamaynta, amniga shabakadda, xakamaynta wireless, oo leh dekedo 9 * 10/100 / 1000M Base-T, 4 * 1000M Combo, 1 * Konsol, 2 * USB2.0. ugu talagal 12 cutub AP liisanka ah, taageerida xakamaynta max.512 APs, soo jeedi ugu badnaan 2000 isticmaale.
DCME-720 DCME-720 waxay iskuxireysaa albaabka, oo leh astaamaha routerka ballaadhan, dab-damiska, wareejinta, VPN, maaraynta taraafikada iyo xakamaynta, amniga shabakadda, xakamaynta wireless, oo leh dekedo 17 * 10/100 / 1000M Base-T, 4 * 1000M Combo, 1 * Konsol, 2 * USB2.0. Soo jeedi ugu badnaan 5000 isticmaale.
DCME-AC-10 Shatiga casriyaynta maareynta AP (shatiga 10 AP)